အသက် (၂၉) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ မှာ တန်ဖိုး ကြီး လက်ဆောင်တွေ အများကြီး ရခဲ့တဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်တွေကို ချပြလိုက် တဲ့ အိချောပို – GaMone Media
Homepage / Celebrity / အသက် (၂၉) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ မှာ တန်ဖိုး ကြီး လက်ဆောင်တွေ အများကြီး ရခဲ့တဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်တွေကို ချပြလိုက် တဲ့ အိချောပို
အသက် (၂၉) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ မှာ တန်ဖိုး ကြီး လက်ဆောင်တွေ အများကြီး ရခဲ့တဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်တွေကို ချပြလိုက် တဲ့ အိချောပို
မနေ့က ဇန်နဝါရီ (၃) ရက်နေ့မှာ အသက် (၂၉) နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ် တဲ့ အိချောပိုတ စ်ယောက် သူမရဲ့မွေးနေ့အမှတ်တရပုံရိပ်လေး တွေကို လူမှုကွန်ယက်မှာဝေမျှခဲ့ပါတယ်။ ခင်မင်ရသူတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေအပြင် လုပ်ငန်းရှင်တွေကပါ သူမအတွက် ကိုယ်စီလက်ဆောင်လေး တွေ ပို့ပေးကြပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ မွေးနေ့လေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ချစ်သူခင်သူပေါများတဲ့အနုပညာရှင်မို့ လက်ဆောင်တွေကလည်း အများကြီးပါပဲ။ ပုံစံဒီဇိုင်းမျိုးစုံ နဲ့ ကိတ်လေးတွေအပြင် သူမနာမည်ထိုးထားတဲ့ ပန်းစည်းအကြီးကြီးကလည်း တကယ်ကိုလှလွန်းနေပါတယ်။ မွေးနေ့မှာ အဖြူရောင်ကိုယ်ကျပ်ဝတ်စုံလေးနဲ့ လှချင်တိုင်း လှနေသူလေးရဲ့ အသက်ဝင်တဲ့အပြုံးတွေကတော့ စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးပါပဲ။
မွေးနေ့ ဆုတောင်းပေးသူနဲ့ လက်ဆောင်ပေး ကြသူတွေကို ” I would like to give my heartfelt gratitude. To every single one of you guys for the lovely birthday wishes on facebook, messenger and phone calls and messages. To the social media pages for your birthday wishes. To my friends, colleagues, relatives and the We Love Group members for the beautiful birthday cakes, birthday presents and flowers & Especially to my family members who were with me the whole day on my birthday. My birthdays will not be as special without you all. Thank you all again for making my birthday special ” ဆိုပြီး သူမက ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။
Previous post သူမ ရဲ့ ရင်ဖက်တစ်ခု ထဲ ကိတ်တာ မဟုတ်ဘူး လို့ သက်သေပြ လိုက် တဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့်
Next post အမိုက်စား ဘစ်ကနီ ဖက်ရှင် လေး နဲ့ ဆ က်ဆီ ကျလွန်း နေတဲ့ ပက်ထရစ်ရှာ